Tantaran'ny habaka sy ny fotoana - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Tantara momba ny habaka sy ny fotoana
Amin'ny 12. Tamin'ny Aprily 1961 dia nijanona izao tontolo izao ary nijery an'i Rosia: Yuri Gagarin no tokony ho olona voalohany eny amin'ny habakabaka, hoy aho satria nandresy an'i Rosia tamin'ny hazakazaka an-habakabaka i Israely. Mba hahatakarana io fanambarana adala io dia tsy maintsy miverina amin'ny fotoana 2000 taona eo ho eo isika. Misy tanàna kely atao hoe Betlehema, izay nandrahona ny ho tondraka ny mpivahiny. Lehilahy efa reraka no nitady toerana hatoriana ho azy sy ny vadiny tany amin’ny toerana rehetra hipetrahana mandritra ny alina. Navelan’ny tompon’ny trano fandraisam-bahiny iray sariaka natory tao amin’ny trano fiompiana teo akaikin’ny biby i Josef sy ny vadiny bevohoka be. Tamin’io alina io no nahaterahan’i Jesosy zanany lahy. Indray mandeha isan-taona amin'ny Krismasy izao tontolo izao dia mahatsiaro ity hetsika lehibe ity - tsy ny fahaterahan'ny mpanamory sambon-danitra voalohany, fa ny fahaterahan'ilay hamonjy ny olombelona rehetra.
Ny fahaterahan’i Jesosy dia iray monja amin’ireo fankalazana maro ankalazaina isan-taona ary mitranga noho ny antony tsy mety rehetra izany. Haingo ny hazo, apetraka ny fandrian-jaza kely, ny ankizy mitafy lambam-pandriana dia maneho ny lanonana manetriketrika amin’ny lalaon’ny nahaterahana ary mandritra ny andro vitsivitsy dia ahafantarana an’Andriamanitra ny tena maha-izy azy. Aorian'izay dia hofenoina soa aman-tsara ny haingon-trano mba havoaka indray amin'ny taona ho avy, fa ny eritreritsika momba an'Andriamanitra dia hofoanana miaraka amin'ity tendrombohitra lehibe misy zavatra ity. Raha ny hevitro dia mitranga izany satria tsy azontsika takarina ny dikan'ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo - tonga olombelona manontolo Andriamanitra ary Andriamanitra iray manontolo ihany koa.
Ao amin’ny toko voalohany amin’ny Filazantsaran’i Jaona dia voalaza fa i Kristy, izay nonina teo amin’ny olombelona, ​​no namorona izao rehetra izao amin’ny hatsarany tsy takatry ny saina. Ny kintana mamirapiratra eny amin’ny lanitra isan-kariva sy ny taona mazava lavitra antsika no namoronany azy. Ny masoandro mamirapiratra, ny elanelana tsara amintsika mba hanomezana antsika hafanana ampy mba hihazonana ny planetantsika ao anatin’ny fifandanjana lavorary, dia napetrak’izy io teo amin’ny halavirana mety indrindra. Ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra, izay talanjona amin'ny dia lavitra eny amoron-dranomasina, dia noforoniny tsara. Ny hira tsirairay izay tsofin'ny vorona dia izy no namorona. Na dia izany aza dia nahafoy ny voninahiny sy ny heriny rehetra Izy ka nitoetra teo afovoan’ny zavatra noforoniny: «Izay nanana ny endrik’Andriamanitra dia tsy nihevitra ny hitovy amin’Andriamanitra ho fandrobana, fa nanary ny tenany ka naka ny endriky ny mpanompo; lasa olombelona mitovy ary fantatra amin’ny endriny fa olombelona. Nanetry tena Izy ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia hatramin’ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana.” ( Filipiana 2:6-8 ).
Andriamanitra manontolo sy ny olombelona rehetra
Andriamanitra mihitsy no teraka toy ny zazakely tsy afa-manoatra, miankina tanteraka amin’ny fikarakarana ny ray aman-dreniny eto an-tany. Nampinono teo an-tratran-dreniny izy, nianatra nandeha, nianjera sy nidona tamin’ny lohaliny, nisy bula teo amin’ny tanany rehefa niara-niasa tamin’ny rainy nitaiza azy, nitomany noho ny fahorian’ny olona, ​​nalaim-panahy tahaka antsika ka niankohoka tamin’ny fampijaliana farany. ; nokapohina sy nororany ary novonoina teo amin’ny hazo fijaliana. Andriamanitra izy ary olona iray manontolo koa. Ny tena loza dia maro ny olona mino fa Andriamanitra dia teo amin'ny olona ary niara-nipetraka tamin'izy ireo nandritra ny telopolo taona. Maro no mino fa niverina tany amin'ny toerana niaviany izy avy eo ary nijery avy teo, avy lavitra, ny fivoaran'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Tsy izany anefa no izy!
Rehefa mankalaza ny Krismasy indray isika amin’ity taona ity, dia te-hizara vaovao mahafaly aminareo aho: Tena tia anareo Andriamanitra ka tsy vitan’ny hoe tonga olombelona Izy ka naneho ny tenany tamintsika ary nijanona niaraka tamintsika nandritra ny telopolo taona, fa nitana ny maha-olombelona Azy Izy. mipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra Ray ankehitriny hitsangana hamonjy antsika. Rehefa niakatra tany an-danitra i Kristy dia izy no olona voalohany teny amin’ny habakabaka! “Iray Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, ​​dia Kristy Jesosy, Izay olona” (Isa.1. Timoty 2,5).
Tsy maintsy mahaleo tena tanteraka ny mpanelanelana. Raha niverina tamin’ny fanjakany teo aloha Jesosy, ahoana no nahafahany nanao mpanelanelana ho antsika olombelona? Jesosy dia nitazona ny maha-olombelona Azy, ary iza no tsara kokoa ho mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona noho ny tenan'i Kristy - dia ilay Andriamanitra rehetra ary mbola olombelona ihany? Tsy vitan’ny hoe nitazona ny maha-olombelona Azy Izy, fa nitondra ny aintsika ho eo Aminy koa ary amin’ny alalan’izany no ahafahantsika miaina ao aminy ary Izy ao amintsika.
Nahoana Andriamanitra no nanao izany fahagagana lehibe indrindra izany? Nahoana izy no niditra ny habakabaka sy ny fotoana ary ny zavaboariny? Nataony izany mba hahafahany mitondra antsika miaraka aminy rehefa niakatra ho any an-danitra ary hiara-mipetraka aminy eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra isika. Koa tsy Jesosy Kristy ihany no niakatra tany an-danitra, fa isika tsirairay avy izay nanaiky an’i Jesosy ho Mpamonjy azy. Miala tsiny aho, Yuri Gagarin.
Eo am-pahatsiarovana ny nahaterahan’i Jesoa Kristy amin’ity taona ity dia tsarovy fa Andriamanitra dia tsy hamela anao na oviana na oviana ao amin’ny efitrano tranainy sy feno vovoka ary tsy hahatsiarovanao anao indray mandeha isan-taona amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao. Mitazona ny maha-olombelona Azy ho toy ny fampanantenana sy antoka tsy tapaka aminao Izy. Tsy nandao anao mihitsy izy ary tsy handao anao mihitsy. Tsy vitan'ny hoe nijanona ho olombelona fotsiny izy, fa nandray ny fiainanao sy miaina ao anatinao sy amin'ny alalanao. Tazony ity fahamarinana mahafinaritra ity ary ankafizo ity fahagagana mahagaga ity. Ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra, Jesosy Kristy, Emanoela dia miaraka aminao ankehitriny sy mandrakizay.